Zvinyorwa paHong Kong
November 26, 2020 Antika Kumari Hong Kong, mabasa
Hong Kong inopa yakawanda yakasarudzika tarisiro yebasa kune vekare-patsva, wepasirese chikamu chemari chikamu, uye mugwagwa pakati peEast neWest. Uye nepo iwe uchida kuve nebasa rekupa kuti utange kushanda muHong Kong, mamwe mabasa akakodzera
Hong Kong visa yevaIndia
October 21, 2020 Maitri Jha Hong Kong, vhiza
Iine zvakawanda zvinokwezva zvinozivikanwa uye mikana yekuona nzvimbo, Hong Kong yakaropafadzwa Uchawana zvinhu zvisingaverengeke zvekuona nekuita. Vanhu vemunyika vanobva kunyika zana nemakumi matanhatu nenharaunda vanogona kushanyira Hong Kong vasina vhiza. Uye, zvichienderana nenyika,
Makore gumi emahinoro muHong Kong
June 17, 2020 Antika Kumari Hong Kong, kudzidza
Kune vangangosvika makumi maviri nemaviri vanopedza kudzidza-mubairo maUniversity muHong Kong. Makumi masere aya ndeeveruzhinji uye mamwe mayunivhesiti akavanzika. Kune ruzhinji rwemakirasi, ese masere masere vunivhesiti muHong Kong anoshandisa Chirungu. Pazasi pane runyorwa
Zvipatara Zvakanakisisa Zvekubatira muHong Kong
April 12, 2020 Shubham Sharma utano, Hong Kong
Hong Kong nderimwe remaguta ane hutano pasi rose. Iwo ehutano ekuchengetedza mabasa muguta akachengetedza mhando yepamusoro. Hupenyu hunotarisirwa hweHong Kong hwakakwirira kwazvo pasirese uri kutenderera makore makumi masere nemashanu. Hong Kong's
Dzidzo uye Zvikoro muHong Kong !!
February 24, 2020 Karuna Chandna Hong Kong, chikoro
Zvikoro Zvakanakisa MuHong Kong! Dzidzo system muHong Kong yakavakirwa kuUK system. Uye inotongwa neDzidzo Bureau neSocial Welfare department. Kune zvikoro zvakawanda zvepasi rese muHong Kong. Vanogona
Chii Imba Imba Imhare uye Mutengo weKugara Mu HonKong
February 19, 2020 Shubham Sharma Hong Kong, dzimba
Hongkong ndiyo inopisisa yekuenda uye iri mune yekutarisa yemufambi wese. Asi iwe waida guta zvekuti zvekuti unoda kugarako pane kutanga unofanira kuva nebasa rakanaka raunokwanisa kutarisa kuti ungaita sei
Inoreva Yekutakura System muHong Kong
February 17, 2020 Antika Kumari tenderera, Hong Kong
Nzira dzeTransion muHong Kong inokwanisa kugutsa zvese zvinodiwa nevashanyi. Izvo zvekufambisa kwepasi zvinosanganisira MTR, matekisi, mabhazi, minibusses, uye tramways. Zvakare, basa remawere pakati peKowloon neHong Kong Island, uye kune Kunze Islands.
Nice hotera muHong Kong
Uri kutsvaga mamwe mahotera akanaka muHong Kong? Hong Kong inzvimbo kune mamwe emakanakiro uye emahotera ekunze futi. Hong Kong imwe yeakanakisa evashanyi nzvimbo munyika. Hong Kong inodaro
Nguva Yakanaka Yekushanyira Hong Kong
February 10, 2020 Antika Kumari Hong Kong, famba
Hong Kong ndomumwe wepamusoro-soro wepamusoro wedzimba dzepamusoro. Kupfuura nzira, kune nzvimbo dzinofema, kusanganisira makomo akanaka nemapaki makuru. Nguva yakanaka yekushanyira Hong Kong iri mumwedzi yepakati paDecember kusvika Kukadzi. When the
Kushanyira Hong Kong? Unofanira kuenda kunzvimbo idzi !!
February 6, 2020 Karuna Chandna Hong Kong, zvinhu zvekuita
Hong Kong inozivikanwa seguta rinopenya. Uye inzvimbo yekusarudzika yekutenga chikafu chemahara. Chinhu chitsva uye chakasiyana chakakomberedza kona imwe neimwe. Inogona kuve tembere yekare kana shopu inotengesa ichangoburwa zvemagetsi. Kushanyira Hong